Umsebenzi izinwele ibhulashi
Ibhulashi lezinwele zakudala
Izinwele ezincibilikisa izinwele
I-paddle cushion hair brush
Round professional igalelo omiswe izinwele ibhulashi
Ibhulashi lezinwele elisha elidumile
Mini izinwele ibhulashi
Ngokhuni noqalo izinwele ibhulashi
Ngokhuni izinwele ibhulashi
Bamboo izinwele ibhulashi
Isihloko: Ukuthengiswa kwe-Line ku-Amazon
Isihloko: Ukuthengiswa kwe-Line ku-Amazon Ningbo Yongsheng Brush Co., Ltd. -enye yezinto ezihola phambili zokuxubha izinwele zebhizinisi eChina. I-Amazon-enye yezitolo ezidayisa kakhulu online online. Kusukela ngo-2018, inkampani yethu yenze ukuthengiswa kwe-e-commerce ewela umngcele e-Amazon futhi yasebenzisa i-forei yayo ...
Isihloko: Ibhulashi lezinto ezintsha-le-Bamboo Fibre / Ibhulashi le-Straw
Isihloko: Ibhulashi lezinto ezintsha-le-Bamboo Fibre / Ibhulashi le-Straw Alikho ipulasitiki, alikho ukhuni, alinansimbi. I-Ningbo Yongsheng Brush Co., Ltd. isebenze ngempumelelo into entsha - i-Biomass composite material. Uhlobo olusha lwezinto ezingamelana nalutho olakhiwa ngezinto ze-macromolecular kanye ne-biomass materia ...
Isihloko: Kusondela ku-Artificial Intelligence (AI)
Isihloko: Kusondela ku-Artificial Intelligence (AI) YEBO, i-AI iyasondela! Ngenxa yobunzima bokuqasha isisebenzi, ikakhulukazi umthelela wesifo esiwumshayabhuqe ngo-2020. UNingbo Yongsheng Brush Co., Ltd. wenze imizamo emikhulu yokuthuthukisa ubuchwepheshe be-AI ekukhiqizeni ngobuningi. Kulezi zinsuku, iningi le-inje ...
Lo Mkhiqizo Ongaphansi Kokubaluleka Kubaluleke Kakhulu Ngezinwele Ezithambile, Ezinempilo
Njengoba singathanda ukuhlehlisa inqubo yethu yokugunda izinwele ngamatshe atholakala ekhishini njengemfoloko (Uxolo, i-Ariel), ukuthenga ibhulashi lezinwele elihle kakhulu ukufanela uhlobo lwezinwele zakho, ukuthungwa, ubude, nokuncamelayo kwesitayela akukona okulula. Ibhulashi olisebenzisela ukunqanda izigaxa noma ukusabalalisa ...
Amabhulashi Wenwele Ahamba Phambili Wokuthambisa I-Mane Yakho
Wonke umuntu udinga ibhulashi lezinwele elihle. Noma ngabe kukhishwa amafindo noma kunikeza izinwele zakho ukwakheka okwengeziwe, ziyithuluzi elinemisebenzi eminingi elibalulekile ekubukeni okuhle kakhulu. Vele, uma ufuna okusha, lapho-ke uzofuna ukuqinisekisa ukuthi uthola eyodwa eyenziwe kahle futhi izokwenza las ...
Lezi zingcwecwe zezinwele eziyisithupha eziyizazi * ngokushesha * zengeza ivolumu nokushuba ezinweleni zakho
Noma ngabe ufuna ukulingisa i-bouffant engamashumi ayisithupha, fakela i-ante ku-updo yakudala noma umane udale ukunyakaza okuthile okuxakile kulo lonke ubude, izinwele ezinamandla azipheli isitayela. Kepha uma uzalwe unezinwele ezinhle, noma izinwele zakho sezinciphile eminyakeni edlule, uzuza ivolumu ...
No.436 Xihe Village Jiulonghu Idolobha Zhenhai District Ningbo, China 315205